Indlu yaseBohemian kwindawo ezolileyo, entliziyweni yePerche - I-Airbnb
Indlu yaseBohemian kwindawo ezolileyo, entliziyweni yePerche
FR: Ekupheleni kwendlela encinci phantsi kwemithi, indlu yethu eneminyaka engama-200 yenye yezindlu ezi-4 ezikhangayo ezenza i-hamlet, i-2 km ukusuka kwidolophana yasePervenchères, phakathi kwendalo ejongene negadi yezityalo. .
ENG: Ekupheleni kwendlela eyimfihlo phantsi kwemithi, indlu yethu yindawo eqhelekileyo ye-200 yeminyaka ubudala, kwi-hamlet encinci ye-4 izindlu ezithandekayo ezi-2km ukusuka kwidolophana yasePervenchères, embindini wendalo ukuya kwintsimi yeziqhamo eziphilayo.
EN: Indlu yethu ebanzi kwaye eqaqambileyo eneendonga zamatye kunye nemiqadi, idibanisa isitayile se-rustic yendabuko kunye nokuhonjiswa kwe-Bohemian yangoku.
Uyakuxabisa igumbi lokulala elikhulu le-30m2 phantsi kophahla kunye ne-1 ibhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye enye kunye nembono yayo yegadi yeziqhamo.
Ungadla isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kwigumbi lokuhlala elikhulu, malunga neziko elidala lamatye. Igumbi lokuhlala linezitulo zokulala kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini.
Indlu inekhitshi elihle elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela.
Indlu ine-drive yayo yabucala, indawo yokupaka kunye negadi ejonge emazantsi eneendawo zokuhlala zelanga phantsi komthi we-apile, ilungele ikhaya elizolileyo nelokuphumla leholide.
Imi kanye ecaleni kwendlu yethu enkulu. Ukwahluliwe ngokubonakalayo, ukuqonda kunye nokuzola kuqinisekiswa.
Le ndlu ibekwe kwindawo entle phakathi kweBellême enomtsalane kunye neMortagne au Perche, apho uya kufumana zonke iinkonzo (intengiso yokutya, iivenkile zeshizi, iivenkile zokutyela kunye neebhari zewayini, iimarike zentakumba kunye neevenkile zakudala ...), kunye nokuhamba okumangalisayo entliziyweni ehlathini odumileyo de Bellême (imithi nyaka-elikhulu ubudala ezimangalisayo, amakhowa ukuthatha okanye chestnuts ...)
Ummandla wethu ulungele ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela ihashe, igalufa kunye nokuloba, imbonakalo yemihlaba yeentlambo intle, kwaye kukhethwa uhambo olubanzi lokuhamba.
Imizuzu engama-20 ukusuka e-Alençon, iyure enye ukusuka eLe Mans naseChartres kunye nekhathedrali yayo edumileyo, iiyure ezimbini ukusuka eParis, kwilali yasePervenchères, kumgama oziikhilomitha ezi-2, inevenkile encinci / ibha / ikhefi. Iingcali zendawo ziquka i-cider, i-calvados, i-pudding emnyama kunye ne-cammbert.
LGBTQIA + Nobuhlobo
ENG: I-cottage inokukhanya, ingaphakathi elibanzi elineendonga zamatye, imiqadi yangaphambili kunye nefenitshala eqinileyo, ebonisa isitayile se-rustic yendabuko kodwa kuhlaziyo lwangoku.
Uyakonwabela igumbi elikhulu le-attic kunye ne-1 kabini kunye ne-1 ibhedi enye ehonjiswe kwisitayile se-chic.
Uya kuba nakho isidlo sasemini kwaye utye kwigumbi lokuhlala elikhulu elijikeleze indawo yomlilo yamatye endala. Igumbi lokuhlala linezitulo ze-armchair kunye ne-1 sofa yebhedi ephindwe kabini, nayo.
Indlu inekhitshi elithandekayo elinezixhobo ezipheleleyo kunye negumbi lokuhlambela.
Indlu ine-drive yayo yabucala, indawo yokupaka, igadi kunye ne-sunbeds phantsi komthi we-apile, ilungele ikhaya elizolileyo nelipholileyo leholide.
Ime ngokufanelekileyo phakathi kweBellême enomtsalane kunye neMortagne au Perche, apho uya kufumana yonke indlela yokuphila yaseFransi (imarike yokutya, iivenkile zamasi, iindawo zokutyela ezilungileyo kunye neebhari zewayini, imarike yeentakumba kunye nee-antics ...), okanye iindawo zokuhamba ezifana neBellême endala kakhulu. ihlathi (imithi emidala, amakhowa okanye ukukha ama-chestnuts ...)
Indawo esihlala kuyo yindawo entle yokuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela ihashe, igalufa kunye nokuloba ngeendawo ezimangalisayo, iingoma zehlathi kunye nothungelwano lwee-'randonées' ukonwabela.
Imizuzu engama-20 ukusuka e-Alençon, iyure enye ukusuka eLe Mans naseChartres kunye nekhathedrali yakhe edumileyo, kunye neeyure ezimbini ukusuka eParis, ilali yasePervenchères ikwi-2km kude, kwaye inevenkile encinci / ibha / ikhefi. Izinto ezikhethekileyo zendawo ziquka i-cider, i-calvados, i-pudding emnyama (i-pudding emnyama), kunye ne-Camembert.
Sifumaneka ngokulula ukunxibelelana nawe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pervenchères